XDE II စျေး - အွန်လိုင်း XDE2 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို XDE II (XDE2)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ XDE II (XDE2) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ XDE II ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XDE2 – XDE II
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ XDE II တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
XDE II များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
XDE IIXDE2 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.776XDE IIXDE2 သို့ ယူရိုEUR€0.662XDE IIXDE2 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.595XDE IIXDE2 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.713XDE IIXDE2 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr7.01XDE IIXDE2 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.93XDE IIXDE2 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč17.32XDE IIXDE2 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.92XDE IIXDE2 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.03XDE IIXDE2 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.09XDE IIXDE2 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$17.42XDE IIXDE2 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$6.01XDE IIXDE2 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.18XDE IIXDE2 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹58.03XDE IIXDE2 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.131.38XDE IIXDE2 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.07XDE IIXDE2 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.18XDE IIXDE2 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿24.15XDE IIXDE2 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.39XDE IIXDE2 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥82.79XDE IIXDE2 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩920.39XDE IIXDE2 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦301.19XDE IIXDE2 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽56.95XDE IIXDE2 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴21.5
XDE IIXDE2 သို့ BitcoinBTC0.00007 XDE IIXDE2 သို့ EthereumETH0.00208 XDE IIXDE2 သို့ LitecoinLTC0.0146 XDE IIXDE2 သို့ DigitalCashDASH0.00901 XDE IIXDE2 သို့ MoneroXMR0.00905 XDE IIXDE2 သို့ NxtNXT64.07 XDE IIXDE2 သို့ Ethereum ClassicETC0.117 XDE IIXDE2 သို့ DogecoinDOGE230.96 XDE IIXDE2 သို့ ZCashZEC0.00973 XDE IIXDE2 သို့ BitsharesBTS30.61 XDE IIXDE2 သို့ DigiByteDGB26.54 XDE IIXDE2 သို့ RippleXRP2.8 XDE IIXDE2 သို့ BitcoinDarkBTCD0.0273 XDE IIXDE2 သို့ PeerCoinPPC2.62 XDE IIXDE2 သို့ CraigsCoinCRAIG360.87 XDE IIXDE2 သို့ BitstakeXBS33.77 XDE IIXDE2 သို့ PayCoinXPY13.82 XDE IIXDE2 သို့ ProsperCoinPRC99.36 XDE IIXDE2 သို့ YbCoinYBC0.000426 XDE IIXDE2 သို့ DarkKushDANK253.95 XDE IIXDE2 သို့ GiveCoinGIVE1713.99 XDE IIXDE2 သို့ KoboCoinKOBO180.43 XDE IIXDE2 သို့ DarkTokenDT0.715 XDE IIXDE2 သို့ CETUS CoinCETI2285.32